Kooxda Arsenal oo saddexdaan ciyaaryahan midkood ku buuxsanaysa booska uu ka baxay Aaron Ramsey – Gool FM
(London) 26 Maarso 2019. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa la soo warinayaa in saddexdaan ciyaaryahan midkood ay u aragto bedelka booska uu ka baxay Aaron Ramsey.
Xiddiga xulka qaranka Wales ee Ramsey ayaa heshiis cusub qalinka ugu duugay kooxda Juventus oo uu ku biirayo, waxaana uu isaga tagayaa Gunners marka dib loo furo suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaaga.
Ciyaaryahanno dhowr ah ayaa la la xiriirnayaa garoonka Emirates si ay bedel ugu noqdaan Ramsey, laakiin sida uu warinayo warsidaha Calciomercato, Arsenal ayay u badan tahay inay soo qaadato midkood labada ciyaaryahan ee Franck Kessie iyo Nicolo Barella.
Dhinaca kale Wargeyska Daily Mail ayaa isna daabacay in Arsenal ay doonayso inay kooxda Manchester United kala soo wareegto Ander Herrera si uu u xoojiyo khadkeeda dhexe, isla markaana uu u buuxiyo booskii uu ka baxay Aaron Ramsey.
Franck Kessie ayaa ka tirsan kooxda AC Milan, halka Nicolo Barella uu ka mid yahay xididgaha loogu raadinta badan yahay kubadda cagta Talyaaniga, waxaana 22-sano jirkaan ay u badan tahay inuu isaga tagi doono Cagliari Calcio ka hor inta uusan bilaaban xilli ciyaareedka soo socda.
Si kastaba ha ahaatee, kooxda Arsenal ayaa doonaysa inay saddexdaan ciyaaryahan ee Ander Herrera, Franck Kessie iyo Nicolo Barella midkood ku buuxiso booska uu ka baxay Aaron Ramsey.